စွယ်စုံးသုံးအကင်းပေါင်းအိုး အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: အမှတ် ၂၁၂ ၂၁၃ မင်္ဂလာဈေးသစ်
ကြည့်သူအရေအတွက်: 50 (+1)
ဟင်းလျာများ,အသား ,ငါး ,ဟင်းသီးဟင်းရွှက်များ ကြော်ခြင်း,ကင်ခြင်း,ပြုတ်ခြင်း,ပေါင်းခြင်း
အချိန်တိုအတွင်း သာမာန်ထက် ၃ဆပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး
တ် ပေးနိင်တဲ့ ပေါင်းအိုးလေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။
မိမိကိုယ်တိုင် တိုက်ချွှတ်ဆေးကြော နေစရာမလိုတဲ့ Auto “Thawwash system” ပါ ပါဝင်ပြီး
အသူံးပြုရာမှာလည်း လွယ်ကူသည့် Flavor Wave Oven လေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
1.plug ကြိူးကို wire ဘုတ်တွှင်အရင်သွှယ်ပါ.
2.အိုးအတွင်း သို့ ပါဝင်သောအောက်ခံ ဇကာကို အောက်ခံထားပါ.
3.အိုးအတွင်းအောက်ခံထည့်ထားသော ဇကာအပေါ် မိမိ (ကင်/ပေါင်း/နွှေး/ချက်/ကြော်) လိုသော
အသား ငါး အသီး အရွက်များ ထည့်ပါ.
3.အပေါ်စက်ပါ ဖန်အဖုံး လက်ကိုင်ကို ကိုင်၍ပေါင်းအိုးကို ဖုံးပါ .
4.မိမိ ထည့်ထားသောအသား ငါး အမျိုးအစားပေါမူတည် ၍ လိုအပ်သည့်
အပူချိန် နှင့် ကြာချိန် ကို စက်ပါဖန် အဖုန်းပေါ်မှ ကြည့်ပါ.
5.ဘယ်ဖက်တွင် timer (1 to 60 mins) ပါပါတယ် ညာဖက်တွင် temperature
(1 to 250ံC) အတိုးအလျော့ ခလုပ်ပါပါတယ် လိုအပ်သည့် အချိန်နှင့်
6.စက်ပါမှန်အဖုံး လက်ကိုင်ကို လှဲချ၍ ပေါင်းအိုး power on စေပြီး ပေါင်းခြင်း
ကင်ခြင်း ချက်ခြင်း ပြုတ်ခြင်း နွှေးချင်း များစတင်ပြုလုပ်နိင်ပါပြီ။
1.အိုးအတွင်းသို့ ရေ နှင့် ဆက်ပြာရည်ကို ထည့်ပါ
3.temperature အတိုးအလျော့ခလုပ်တွင် Thawwash သို့ပြောင်းပေးပါ
.စက်ပါ မှန်အိုး အဖူံးလက်ကိုင်ကိုလှဲချ၍ power on စေပြီး
စက်အတွင်း ဆီများ ဂျီးများကိုဆေးပေးသွှားမှာဖြစ်ပါတယ်
ဈေးနှုန်း – 26500 ကျပ်
ဆိုင် အမှတ် ၂၁၂ ၂၁၃ မင်္ဂလာဈေးသစ် မြေညီ